साउदीका महिलाले गर्न नपाउने ९ काम
१४ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार १२:०४	0 1,079
महिलाहरुका लागि निकै कठिनपूर्ण देश हो साउदी अरब । जहाँ महिलाहरुलाई 'स्वतन्त्रता' केवल उखान जस्तै बन्ने गरेको छ । महिलाहरुले पाउनुपर्ने बिश्वब्यापी अधिकार समेत त्यहाँका महिलाहरुले पाउदैनन । महिलाहरुका लागि केही प्रतिबन्धहरु छन् । उनीहरुले यदी यो नियम तोडेको खण्डमा बिभिन्न खालका कारबाही समेत गरिन्छ । यस प्रकारको नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीका लागि बिशेष प्रहरी फोर्स नै गठन गरिएका छन् । यसैबीच त्यहाँका महिलाहरुलाई यी लगायत बिभिन्न अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न आवाजहरु उठिरहेका छन् । त्यहाँ महिलाहरुलाई यस्ता झिनामसिना कुराहरुमा समेत बन्देज लगाईएको छ कि जुन थाहा पाउनु भयो भने तपाई अचम्मित हुनुहुनेछ । पढ्नुहोस् त्यहाका महिलालाई प्रतिबन्ध गरिएका ९ काम ।
१३ फाल्गुन २०७२, बिहीबार १७:५४	0 3,443
१२ फाल्गुन २०७२, बुधबार १५:३८	0 1,823
मोदीको भाषण: जुनसुकै भाषामा पनि खररर कसरी ? यस्तो छ रहस्य
११ फाल्गुन २०७२, मंगलवार १५:४०	0 2,840
मोदी जुन समुदायमा पुग्छन त्यही उनको हाइहाइ हुन्छ । त्यसो त नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि उनको भाषण सुनेर धेरैले मुक्तकण्ठले प्रंशसा गरे । मान्छेलाई मोहित पार्न र बडी ल्याङ्गोएजका लागि निकै माहिर मोदी अंग्रेजीमा समेत खररर भाषण गर्छन । उनको अंग्रेजी भाषण सुनेर पश्चिमेलीहरु सम्म अचम्ममा पर्ने गरेका छन् । घोकेर/कण्ठ गरेर गरेको भाषण स्रोता/दर्शकले सहजै चाल पाउन सक्छन तर मोदीले दर्शकदीर्घामा हेर्दै निर्धक्क मख्ख पर्ने भाषण गर्छन कसरी ? के तपाईलाई थाहा छ ? उनले लेखेको भाषण नै पढ्ने हो तर उसको नजिक कुनै कागज देखिदैन । त्यसैले दर्शकहरु झुकिन्छन तर उनले दर्शक/स्रोतालाई 'उल्लु' बनाइरहेको कसैले चाल पाउदैनन । आखिर रहस्य चाही के त ? पढ्नुहोस् ...
११ फाल्गुन २०७२, मंगलवार १२:००	0 1,753
१० फाल्गुन २०७२, सोमबार १४:०६	0 915
ओलीलाई हिरो देखाउने भारत भ्रमणका तीन भाइरल फोटो
९ फाल्गुन २०७२, आईतवार १७:४०	0 498
६ दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले चर्चाको शिखरमा छन् । कुनै खास उपलब्धिले होइन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको तस्बिरहरुका कारण उनको चर्चा चुलिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीका हेर्नलायक फोटोहरुलाई लिएर यतिबेला सामाजिक संजालहरुमा बिभिन्न टिका टिप्पणीहरु भैरहेका छन् । कतिपयले यसलाई गर्ब गर्न लायक भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयले क्यामेरा पर्सनको कमाल भनेर संयोगको संज्ञा दिएका छन् । यी तस्बिरको खास अर्थ के होला त ? पढ्नुहोस्...
९ फाल्गुन २०७२, आईतवार १६:२४	0 659
भारतसँग यी ७ बुंदे सम्झौता : नेपाललाई के के फाईदा ?
९ फाल्गुन २०७२, आईतवार १०:०२	0 489
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला भारत भ्रमणमा छन् । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बिभिन्न महत्वपूर्ण सवालहरु उठाउनुका साथै नेपाल-भारतबीच ७ बुंदे सम्झौता समेत गरेका छन् । यसलाई भारतीय मिडियाले खासै चासो नदिए पनि नेपाली मिडियामा भने 'हट केक' बनिरहेको छ । हैदराबाद हाउसमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा र भारतीय विदेश मन्त्री सुस्मा स्वराजबीच सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरिएको थियो । पढ्नुहोस् यी ७ बुंदा र मनन गर्नुहोस् यसबाट नेपाललाई के कति फाइदा अथवा बेफाइदा भएको छ ?
८ फाल्गुन २०७२, शनिबार १४:४३	0 455
यतिबेला भारतमा एउटा फोन निकै भाइरल बनिरहेको छ । भारतमा मात्रै होइन बिश्व बजारमै यो फोनका बारेमा अनेक टिका टिप्पणीहरु भैरहेका छन् । यो फोनको अर्डर गर्नेहरुको त ताँती नै छ । फोन अर्डर गर्नेहरुको भिडले कम्पनीको वेबसाइट नै क्रयास भएको छ । यो फोनको बिज्ञापनका लागि मात्रै कम्पनीले करोडौ खर्च गरेको छ । यो फोनको बारेमा यति धेरै चियोचर्चा बढेको छ कि त्यहाको राजस्व बिभागले छापा मारेको छ । आखिर यो फोन किन र कसरी भयो भाइरल अनि कसरी मच्चियो हंगामा ? पढ्नुहोस्....
८ फाल्गुन २०७२, शनिबार ११:५२	0 1,103
६ फाल्गुन २०७२, बिहीबार ०९:१८	0 7,641
५ फाल्गुन २०७२, बुधबार १५:२९	0 1,325
बिश्वकै सबै भन्दा सस्तो स्मार्टफोन कुन होला ? अनुमान गर्नुहोस त कतिपर्ला विश्वकै सबैभन्दा सस्तो स्मार्ट फोनको मूल्य ? तपाईको अनुमान सायदै मिल्ला । फोन कम्पनीहरु बीच फोनको फिचर, मूल्य र गुणस्तरीयतामा यति धेरै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ कि जुन हामीले सोच्ने सकेका छैन । हो यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ हालै सार्वजनिक भएको एउटा स्मार्टफोनले । सस्तो फोनको फिचर के राम्रो होला र भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । तर होइन यो फोनको फिचर पनि मूल्य जस्तै अपत्यारिलो नै छ । बिस्तृत पढ्नुहोस....
५ फाल्गुन २०७२, बुधबार १३:०३	0 368
राष्ट्रपति अर्थात् मुलुकको सर्वोच्च व्यक्ति । जसले दैनिकजसो सयौ आरोप प्रत्यारोप झेल्नु पर्ने हुन्छ । तर एउटी बालिकाको चिठ्ठीले राष्टपति जस्तो व्यक्तिको टाउको दुख्नु/ निद्र हराउनु भनेको पक्कै चानचुने कुरो भने होइन । तर भै दियो यस्तै । घटना भारतको हो । त्यहाका एक १३ बर्षीय बालिकाले राष्टपतिलाई १० दिने अल्टिमेटम सहित चेतावनी पत्र लेखेकी छन् । गुजरातको आनन्द जिल्लामा बस्ने इशिका गुप्ताले राष्टपति प्रणब मुखर्जीलाई १० दिन भित्र कि न्याय देउ कि मर्न देउ भन्दै पत्र लेखेकी हुन् । बिस्तृत पढ्नुहोस् ......
२४ फोटोमा हेर्नुहोस् महिला र पुरुषबीचको रोचक भिन्नता
४ फाल्गुन २०७२, मंगलवार १५:२१	0 1,946
महिला र पुरुष बीच शारीरिक तथा मानसिक रुपमा भिन्नता हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ । तर हाम्रो ब्यबहारिक जीवनमा कमैले मात्र सोचेका होलान कि पुरुष र महिला बीच यति धेरै रोचक भिन्नता पनि हुदो रहेछन भनेर । पत्याउनु भएन ? यी २४ फोटोमा हेर्नुहोस् महिला र पुरुषको सोचाइ तथा ब्यबहारमा हुने भिन्नताहरु जुन हेरेर तपाईलाई अचम्म मात्रै होइन पेट मिचिमिची हाँस्न बाध्य बनाउछ ।
नेपालसँग हारेपछि भारतको यस्तो आक्रोस, नेपाली खेलाडीले यसरी लिए बदला (हेर्नुहोस भिडियो)
४ फाल्गुन २०७२, मंगलवार ०९:४०	0 1,518
सोमबार साँझ नेपालका लागि एतिहासिक दिन बन्यो । भारतमा जारी १२ औं साग खेलकुद अन्तर्गत नेपालले भारतलाई हराएपछि मैदानका खेलाडी मात्रै होइन नेपालभर र प्रवासी नेपालीहरुको मुहार समेत हर्षले बिभोर बन्यो । खेल जित्ने बितिक्कै बिभिन्न ठाउमा राती नै विजय जुलुश निकालियो । त्यसो त बिभिन्न संघ सस्थाले पुरस्कार घोषणा गर्ने क्रम जारी नै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि खेलाडीहरुको सम्मानमा कुनै कमि नगर्ने बताएका छन् । हार त्यसै पनि स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ त्यस माथि आफ्नै घरेलु मैदानमा । अझ बिडम्बना त के छ भने भारतले नेपाललाई 'झिनामसिना' दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको छ । यस्तो अबस्थामा नेपालसंग पराजय भोग्न परेपछि भारत आक्रोसित मात्र बनेन क्रुद्ध बन्यो । हेर्नुहोस् भिडियो ......
गुगलको नजरमा कुन देश केको लागि फेमस ? (हेर्नुहोस रोचक म्याप)
३ फाल्गुन २०७२, सोमबार १५:२०	0 373
करुवाका लागि पाल्पा, दहीका लागि भक्तपुर, तरकारीका लागि टिस्टुङ् । हो, नेपालका बिभिन्न ठाउहरु बिभिन्न उत्पादनका लागि फेमस छन् । यस्तै बिश्वका ७ महादेशका देशहरु कुन देश के कालागि फेमस होलान ? के तपाईलाई थाहा छ ? धेरैलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ र कतिपयको जानकारी अपुरो हुन् सक्छ । आखिर जे होस्, हामी तपाईलाई यो जानकारी दिदैछौ । गुगलको यो म्याप जानकारीमुलक मात्र छैन रोचक पनि छ । हेर्नुहोस्.....
३ फाल्गुन २०७२, सोमबार १४:०४	0 492
सिंगो देशको अर्थतन्त्र धान्दै एउटा खेलौना !
३ फाल्गुन २०७२, सोमबार १०:२१	0 1,012
देश अनुसार धर्म, सस्कृति र परम्पराको बिभिन्न मान्यताहरु रहि आएका छन् । कुनै पनि परम्परा र मान्यताहरु ति देशका नागरिकका लागि ठूलो महत्वको हुने गर्दछ । यस्तै एउटा परम्परा छ थाइल्याण्डमा जहा यो परम्परा यति धेरै बलियो बनेको छ कि यसैले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने अबस्था बनेको छ । सुन्दा अनौठो लागे पनि यो सत्य नै हो । आखिर के हो त त्यो मान्यता ? पढ्नुहोस् ....
३ फाल्गुन २०७२, सोमबार ०८:३३	0 913
भ्यालेन्टाइन डे मनाउने १३ देशका १३ तरिका
२ फाल्गुन २०७२, आईतवार ०९:०६	0 600
आज भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रणय दिवस । आफ्नो प्रियसीसँग प्रेम साट्ने र एक अर्कामा समर्पित हुने दिन । पछिल्लो केही बर्ष देखि नेपालमा पनि भ्यालेन्टाइनमा रम्ने/झुम्ने युवायुवतीहरुको भिड बाक्लो छ । प्रकृतिका काखदेखि स्टार होटलसम्म भ्यालेन्टाइन जोडीहरु भेटिन्छन् । भ्यालेन्टाइन डे भन्ने बितिक्कै प्रियसी भेटेर मनका कुरा साट्ने, रमाइलो गर्ने भन्ने बुझिन्छ तर बिश्वका बिभिन्न देशहरुमा बिभिन्न किसिमले भ्यालेन्टाइन डे मनाउने चलन छ । पढ्नुहोस् बिश्वका १ देशमा भ्यालेन्टाइन दिवस मनाउने तरिका जुन पढेर तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ ।
गर्लफ्रेन्डसँगै विवाह गर्नु पर्ने ३ कारण
१ फाल्गुन २०७२, शनिबार ०९:२९	0 405
धेरै युवाका लागि जोश बिसाउने माध्यम बनेका छन् गर्लफ्रेन्ड । उनीहरुका लागि गर्लफ्रेन्ड केवल टाइमपास र मस्तीका लागि मात्रै हुने गरेका छन् । यति मात्रै होइन आफ्नो शारीरिक आवश्यकता पूर्ति गर्दै गर्लफ्रेन्ड फेर्ने चलन पनि बढ्दो छ । तर सोचनीय कुरा यो हो कि गर्लफ्रेन्ड केवल मोज मस्ती र रमाइलोका लागि मात्रै कि बिबाहकै लागि पनि ? यहाँ हामीले गर्लफ्रेन्डसंगै बिबाह गर्नुपर्ने ३ कारण प्रस्तुत गरेका छौ जसले तपाईलाई आफ्नो गर्लफ्रेन्डका बारेमा सोध्न बाध्य तुल्याउछ ।
यौन शोषणमा परेका ७ स्टार सेलिब्रिटी
२९ माघ २०७२, शुक्रबार १४:१२	0 513
महिला यौनका पुतली होइन तर यौन प्रेरकका सारथी हुन् । यो पनि सत्य हो कि धेरै पुरुषहरुले यौन उन्माद सहन सक्दैनन् । त्यसैले त ठूल्ठूला स्टारहरु समेत यौनको मामलामा चुकेका छन् । धेरै जसो सर्वसाधारण महिलाहरु बढी यौन शोषणमा पर्ने गरेको सुनिन्छ, यसको मतलब ठूला शिक्षित र बरिष्ठहरु यौन शोषणमा पर्दै नपरेका भने होइनन । ठूला स्टार सेलिब्रेटीहरु समेत आफु यौन शोषणमा परेको खुलासा गर्दै आएका छन् । को को हुन् त यौन शोषणमा परेका स्टार सेलिब्रेटीहरु ? पढ्नुहोस् ....
२८ माघ २०७२, बिहीबार ११:४१	0 520
२७ माघ २०७२, बुधबार ०९:१३	0 4,158
क्यान्सर समेत जितेका पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको एक्कासी मृत्युको खबर सुन्दा मंगलबार बिहान धेरै नेपाली अचम्मित बने । न बिरामीको हल्ला थियो न त कुनै दुर्घटना नै । त्यसैले पनि धेरैले पत्याएनन तर नपत्याई सुखै भएन । ठूल्ठूला अस्पतालहरुको नजिक बस्ने पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मृत्यु घरमै भएपछि यति बेला उनको मृत्युमाथि शंकै शंका उब्जिन थालेका छन् । यति मात्र होइन उनलाई ओढाइएको सिरक र उनको निधारमा समेत रगतको दाग देखिएपछि शंकाले लंका जलाउने प्रमाण मिलेको छ । थप पढ्नुहोस् .......